Chengda Mashiinka daboolka warqadda laba-lakabka ah ee cajiibka ah Baakadaha Dunida (Shanghai) Expo
At the Shanghai New International Expo Center swop 2019 Baako World Expo on Nofeembar 25-28, 2019, waabkii Haining Chengda Makiinado Co., Ltd. waxaa ku hareereysnaa booqdayaal ka yimid dal iyo dibad maalin kasta. Dadku waxay sii wadeen inay la wadaagaan wararkii ugu dambeeyay ee ay keeneen mashiinada Chengda. Sawir koox o ...
Bandhigga SWOP 2019
Bandhigga Caalamiga ah ee Baakadaha (Shanghai) oo labadii sanoba mar la qabto (SWOP) ayaa la qaban doonaa Nofeembar 25th ilaa 28th. Kaliya maahan mid saameyn ku leh soo bandhigida alaabada, laakiin sidoo kale waa fursad aad u fiican oo isweydaarsiga xirfadeed ee warshadaha baakadaha. Aan ku kulanno Shanghai New International E ...
Mashiinka koobka waraaqaha ayaa u kobcaya dhanka isbeddelka ilaalinta deegaanka
Maalmahan, ilaalinta deegaanka waxay noqotay moodo, iyo warshadaha ilaalinta deegaanka ayaa sidoo kale soo koraya. Mid ka mid ah isbeddelada muuqda ee ugu dhow nolosha dadka ayaa ah soo kororka warshadaha baakadaha iyo weelka waraaqaha. Dhibaatooyin daran ayaa ka jira wax soo saarka ...
Waa maxay tubada toosan ee bireedka aluminium isku dhafan
Waxaan rumeysanahay in qof kastaa uusan aqoon u lahayn xirxirida tuubbada xaashiyaha, iyo tuubooyinka waraaqaha ayaa sidoo kale badanaa loo isticmaalaa nolol maalmeedka. Marka la soo saaro baakadaha warqadda wax lagu duubo, waxaa jira noocyo aad iyo aad u badan oo tuubooyin xaashi ah. Dhexdooda, tuubada waraaqaha xaashi ee aluminiumku ka kooban yahay waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ...
Bandhigga Masar bishii Sebtember 2018
Magaca Bandhigga: Lambarka Booth ee Baakadaha iyo Daabacaadda Masar: R3-3- Hoolka 1B Waqtiga: Sebtember 10-12, 2018 Goobta: Xarunta Shirarka iyo Bandhigga Qaahira, Masar
Tiknoolajiyada hogaamineysa, dhinaca caalamiga ah
Dhawaan, markii ay soo if baxeen dhowr baabuur oo konteenarro ah, SMD-90 oo ay soo saartay shirkadda Haining Chengda Machinery Co., Ltd., oo xawaarekeedu yahay dhexdhexaad daqiiqaddii 120, ayaa mar kale dibedda aaday oo loo dhoofiyay Griiga, Ukraine, iyo Algeria. Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddayadu waxay si isdaba joog ah u soo bandhigtay heer sare ...
Maxay yihiin "fursadaha" iyo "caqabadaha" soo foodsaaraya warshadaha baakadaha ee cudurka hadda socda?
Bandhigga Guga waa waqti ku habboon isu imaatinka qoyska. Ku raaxeysiga waqti casho diiran qoysaska iyo asxaabta waxay ku xiran tahay inay keento qaraxyada isu imaatinno waaweyn, kuwa dhexdhexaad ah iyo kuwa yaryarba iyo xaflado casho ah oo dalka oo dhan ka dhaca Tani runti faa iido weyn ayey u tahay warshadaha cuntada iyo tafaariiqda ....
Cudurka faafa ma saameynayo dhoofinta mashiinka daboolka warqadda ee Chengda
2020-03-02 waa maalin aan caadi aheyn Haining Chengda Machinery Co., Ltd. 10 maalmood un kadib markii dib loo bilaabay shaqadii, dhoofinta mashiinada waraaqaha badan lagu duubto ayaa si guul leh loo dhameeyay. Saamaynta cudurka faafa ee shirkadda waa mid xadidan. Tan badanaa waxaa u sabab ah madaxda shirkadda oo had iyo jeer ...
Waqtiga kama dambaysta ah ee mamnuucaya iyo xaddididda caagagga dalkaygu waa cad yahay!
Komishanka Horumarinta iyo Dib-u-habeynta iyo Wasaaradda Ecology iyo Deegaanka ayaa 19-kii ku dhawaaqay "Fikradaha ku saabsan sii xoojinta daaweynta wasakheynta caaga". Dhamaadka sanadka 2020, wadankeygu wuxuu hogaamin doonaa mamnuucida iyo xadidaada wax soo saarka, sal ...